Bilaogeran-dahatsary manerantany nifaninana hahazo ny BOBs (fizarana I) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2018 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, македонски, English
Nisafidy mpifaninana miisa 176 ho an'ny sokajy 16 samihafa ny BOBs tamin'ny fifaninanana isan-taona izay nokarakarain'ny Deutsche Welle ho an'ny famokarana amin'ny aterineto toy ny bilaogy, rakipeo ary bilaogin-dahatsary. Ao amin'ny sokajy famahanana bilaogin-dahatsary, nifaninana ho an'ny voninahitra hisalotra ny ho tsara indrindra ao amin'ny vondrona misy azy ireo mpandray anjara avy amin'ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao, ary ny 26 Novambra no nahafahan'ny mpifidy farany nifidianana ny mpandray anjara izay nankafizin'izy ireo. Ireto manaraka ireto ny vitsivitsy tamin'ireo voafantina, tsy misy filaharana. Vakio ny fizarana faharoa amin'ity ampahany ity.
Tao anatin'ny efa-taona lasa, nonina tany Espaina ilay bilaogeran-dahatsary Kolombiana Alejandro Ángel ary naka sary ny zavatra niainany hatramin'ny volana Febroary 2007 tao amin'ny bilaogin-dahatsariny Armadillo TV izy. Ireto manaraka ireto ny famintinana ny sary miisa 4000 tao anatin'ny 4 taona farany:
Fantsom-pahitalavitra an-tserasera sady fandaharana anaty aterineto nataon'ny Iraniana iray monina any California ny Bebin TV. Tamin'ireo andian-tantara miisa 56 ao amin'ny Bebin Office, dia namoaka ny dikanteny Persiana manokana tamin'ny andian-tantara malaza Amerikana sy Britanika izy ireo. Manana lahatsary momba ny dia, fiantsenana ary vaovao ihany koa izy ireo .
Miangaly rap momba ny politika, ny toekarena ary ny hetsika tao amin'ny bilaoginy Ill Doctrine ilay mpanakanto hip hop DJ Jay Smooth . Ao anatin'ity lahatsary manaraka ity dia asehony ny fiaraha-miasa teo amin'ny mpanakanto hip hop avy amin'ny firenena samihafa, izay miangaly rap amin'ny fiteny 3 samihafa:
Voafidy ihany koa ny tetikasa ho an'ny bilaogin'ny fampielezam-baovaon'olontsotra Voices of Africa. Manolotra finday na fandraketan-dahatsary kely hoan'ireo mpanao gazety any amin'ny firenena miisa 33 samihafa ny tetikasamba ahafahan'izy ireo manaraka ny vaovao ary mandefa ny votoaty amin'ny alàlan'ny tambajotra finday sy aterineto mankany amin'ny tranokalan'ny AfricaNews.
Avy any Maraoka i Mostafa al Baqali ary mampiseho ny fiainana ao an-tanàndehibeny izy, izay mifantoka amin'ny tantaran'ny fiainan'ny olona ao an-toerana. Mampiseho amintsika ny zava-tsarotra atrehin'ny fiainana ho an'i Abdul Latif, Maraokana jamba iray ny andian-tantara farany:
Bilaogin-dahatsary Rosiana mandrakitra ny fahatongavan'ny lamasinina any amin'ny tanàndehibe Rosiana samihafa ny The New Lumiere, mpanara-damaody momba ny fankafizana lamasinina.
Ho hitanao amin'ny lahatsoratra manaraka ireo mpifaninana tafakatra famaranana iraisam-pirenena ho an'ity loka ity.